कोरियन अभिनेत्री क्लाउडिया किमको बलिउड मोहः ‘काम गर्ने सपना देखिरहेकी छु’
सोमबार, २ पुष, २०७५
एजेन्सी । कोरियन अभिनेत्री क्लाउडिया किमले पनि कुनै न कुनै दिन बलिउडको दुनियामा नयाँ अनुभव लिनेछिन् । अभिनेत्री किमले न्युज एजेन्सी आईएएनएसलाई भनेकी छन्, ‘मेरो धेरै साथीहरु छन्, जो यस उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । मैले पनि बलिउडमा काम गर्न चाहन्छु । कसलाई के थाहा, जीन्दगीले कता लैजान्छ ?’
उनले थपिन्, ‘वास्तवमा मलाई लाग्छ अब कुनै पनि सीमा छैन । चीनिया अभिनेत्री झु झु जस्ती मेरो साथीले बलिउड फिल्म ‘ट्युवलाइट’मा काम गरिसकेकी छन् । बलिउड एक ठुलो उद्योग हो, जहाँ मैले काम गर्ने सपना देखिरहेकी छु ।’ किमले ‘किम अभेञ्जर्सः एज अफ अल्ट्रोन’ र ‘द डार्क टावर’ जस्त फिल्ममा काम गरिसकेकी छन् ।
अभिनेत्री किमले योजना बनाउन तीन वर्ष लागेको बताउँदै भनिन्, ‘योजना बनाउनु राम्रो हो, तर तपाईले प्रत्येक कुराको योजना बनाउन सक्नुहुन्न । मैले जीवनभर अभिनय गर्नुपर्छ ? मेरो जीवनका अन्य लक्ष्य के ? लगाएतको फैसला गर्न मलाई तीन वर्ष लाग्यो ।’
कोरियन अभिनेत्री क्लाउडिया किम
जब सञ्जय दत्तले अमिताभ बच्चनसँग काम गर्न मानेनन्
एजेन्सी । बलिउड जगतका शताब्दीकै महानायक अमिताभ बच्चन यस्ता सुपरस्टार हुन् जोसँग हरकोही काम गर्न चाहन्छन् ।
गोकुल बाँस्कोटाले व्यंग गर्दै भनेः आफुलाई कस्तो पीर लागो बाई !!!
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समुहका नेता गोकुल बाँस्कोटाले अष्ट्रेलियाले नेपालले अघिल्लोसाल नै ल्याउन खोजेको जस्तै समाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन पास गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा पुनः बर्डफ्लु भेटियो
काठमाडौँ । काठमाडौँमा पुनः बर्डफ्लु देखा परेको छ । पशु सेवा विभागले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौँको तारकेश्वर नागरपालिकामा साढे १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिएको छ ।